Esi sihloko sivakalisa nakanjani nawuphi na umama. Kule njongo, akufuneki ukuba kubekho kwiSebe lezonyango, kodwa nangona abakubonayo banokubangela iingcamango ezinengqiqo. Bangaphi abancinci abasweleyo! Awukwazi ukulinganisa ubunzulu bentlungu yomzali, xa unomntwana onomdla kwaye onempilo ngokukhawuleza kukho intlekele - uhlala ekhubazekile okanye efa ngenxa yengozi engaqhelekanga. Ngoko, izigulane, izingozi phakathi kwabantwana-isihloko sesincoko namhlanje.
Ngokwezibalo, ininzi yengozi ebulalayo yenzeke ebuntwaneni, xa umntwana engenakukunceda ngokupheleleyo kunye nokunyamekela akuyona into elula. Abazali abancinci banesiqinisekiso sokuthi ubunzima bungenzeka nakubani na, kodwa kungekhona ngeentlanzi zabo. Ukholo, eneneni, luhle kakhulu, kodwa ubomi bukhuni buya kuthi ukukhathazeka kubangelwa yimpazamo yomzali, into engeyiyo, kwaye ayiyingozi nje! Nazi izibonelo.
Umama wathabatha umntwana embhedeni wakhe. Ndandilele, ephupheni "ndazibethelela" ndazicima kwaye ndavala umoya wam nomzimba wam. Xa evuka, umntwana wayesele uluhlaza okomvu ... Ngokuqhelekileyo, ukuba athathe umntwana, unina umnika ukuba atlale ngesikhwama seplastiki, kwaye "ukhawuleza" ekhitshini ngomzuzu. Le "minutochki" yanele ukwenza umntu ongenangqiqo abeke ipakethe entloko yakhe okanye cinezela ifilimu ebusweni bakhe. Imiphumo ingaba yinto edabukisayo. Ukuxhatshazwa kwimizuzu yokuqala yokuqala yobomi bentsana kudibaniswa nokuwa. Umama uhamba ngokukhawuleza etafileni elitshintshayo (okanye ebhedeni) - Ndiqinisekile ukuba akazi ukuba aphendule njani, ahlale phantsi, ahambe. Kodwa ngezolo ndingazi ukuba njani, kodwa namhlanje ndifunde! Ngoko wavelisa ... Kwaye wayephantsi. Ewe, ukuba yonke into iphela kuphela ngemivimbo kunye nemivimbo, kodwa ngokuqhelekileyo kwanentsana inokulimala kongqondo kunye nomxube.
Ngelishwa, ngamanye amaxesha oomama bashiya umntwana kwisihlalo sabakhubazekile, bengakholelwa ukuba kukho ukhuselekile. Bayakulibala ukuba emva kweenyanga ezintandathu umntwana usenokuzibamba, avuke aze aphume. Ewe, ukuba umntwana wakho okhulile angakwazi ukukhwela okanye "ukunyathela" kwibhontoni, uze ususe kuyo zonke iisitulo, iibhokisi kunye nezinye izinto onokunyuka ngazo uze uxhomeke ekuhlaseleni. Kwaye ngokubanzi, umnyango webhokisi kufuneka ube kwi-hook, kwaye kwinqanaba elingenakufikeleleka kwintsana.
Emva kweenyanga ezintandathu, abantwana sele bekhuthele, baninzi-kwaye baya kuqala ukuhamba. Kodwa ngelixa behamba bengakhuselekanga kakhulu, babamba yonke into ejikelezileyo. Zama ukususa zonke izinto ezingadingekile neziyingozi ukusuka endleleni yomhambi oselula! Okumangalisayo kukuba, abantwana bonyaka wokuqala wobomi bahlala behliswa ngumlilo, owenzelwa ngumama onothando. Kwisebe elivuthayo, abantwana babanjwa, abathengwa ngamanzi ashushu. Incinci umntwana, ukhathalela ngakumbi isikhumba sakhe kwimiphumo yamanzi aphezulu. Kukho imeko xa oomama bongeza ngokukhululeka i-potassium permanganate kwindawo yokuhlamba okanye ngephutha lokuthabatha.
Abantwana emva konyaka bavutha kakhulu ubisi obushushu, itiye. Ubushushu ubuso kunye nomntwana we-mucosa umntwana angakwazi ukufumana ukungafihli ngokungafanelekanga. Oogqirha ngokwabo badla ngokucetyiswa ukuba baqhube le nkqubo kwinkqubo yokubanda. Oomama abathandekayo, bathandekayo oogogo! Thenga isixhobo esikhethekileyo sokunwabalala - kuya kukuhlawula ngaphantsi kokunyanga umntwana kushushu!
Ebusika, xa kubanda, abazali bafaka ipayipi yokufudumala ebhokisini lomntwana. Nasi ityala ebomini: inkwenkwe eneminyaka elishumi ubudala ihlupheke nge-enuresis. Ngandlela-thile ngethuba lokusetyenziswa kwebhotile yamanzi ashushu, ucingo luvaliwe ngokukhawuleza, umntwana wayesebenzisa i-electrocuted. Kwaye kaninzi kangakanani, xa ushushu umntwana, ubeka umbonisi osondeleyo kumbhede? Ukusuka ekutshiseni okutshisa, i-diapers inokubamba kalula umlilo, kwaye umntwana uya kutshisa.
Emva konyaka, abantwana bazinqatshelwe, lonke ixesha lihamba. Abadala bazama ukuwayeka ngamazwi akrakra: "Buyela!", "Musa ukuzibamba!", "Musa ukutsala emlonyeni wakho!" Yonke into ayinalutho. Emva koko, ukunyakaza, ukuqwalaselwa kwehlabathi kuboniswe ngokoqobo kwendoda encinane. Kulungiselelwe ukuba ubambe nantoni na ekhohlakeleyo, ikhupha emlonyeni. Ukongezelela, amazinyo akhe aqoshiwe! Yingakho i-stomatitis ihlala rhoqo kule minyaka, ebangela iinyembezi ezibuhlungu kunye nomkhuhlane ophezulu. Ukuze ugweme le ngxaki, hlamba iitys, ubaphathe ngesisombululo se-2% yesoda. Kwaye izigulane ezithintekayo azilimazi ukuba zichithe i-disinfect kunye nesisombululo esifanayo okanye isisombululo se-drugx. Ungakulibali ukuba umntwana unokutsala emlonyeni wakhe, kungekhona nje into yokudlala, kodwa iipilisi enhle. Amachiza ngohlobo lwamaqabunga aqabileyo anjengokutya kunye nabantwana abadala. Ngamanye amaxesha utyhefu kunokuba nzima ukuqonda ngokukhawuleza. Ndadla, umzekelo, umntwana we-elenium okanye i-clonidine kwaye wayelele. Uvuka kuphela? Ngoko ukuba umntwana wakho ulele, ulele ixesha elide, akafuni ukuvuka - uqaphele, akayi kungqongqoza ingxaki yomnyango? Ngaphezu kwe-50% yazo zonke iityhefu zetyhefu ngabantwana kwiminyaka yokuqala yobomi. Eyona nto ityhefu ngamachiza. Kwaye uninzi unina uyavuma ukuba ukungabakhathaleli kwabo kubangelwa yizingozi zabo.
Akunakuqonda rhoqo ukukhupha umntwana oneminyaka emibili ubudala, kumenza abe neurosis. Naliphi na izicelo zokungathinti iiglasi zegogo, imithi kunye nokunye akunalo intsingiselo kumntwana wale minyaka. Musa ukuthukuthela ngeze! Kungcono ukumkhusela kwiingozi. Oku akusebenzi nje kuphela kwiimimese ezibukhali, iifoloko, kodwa kunye namaqhosha amancinci, ukuthunga izilingo, kunye nezinto, ukuvuthwa okungaholela ekufeni. Kule nkalo, amaqanda enqabileyo enobungozi angamangalisa-ukuba, xa kukho izinto ezifihliweyo zincinci. Ukuba into yangaphandle ifike emqaleni komntwana, kubaluleke kakhulu ukuba abazali bangadideki, into elula ukuyiphakamisa imilenze igxininise kwaye iyigubungele. Ngokuqhelekileyo oku kwanele ukwenza into yangaphandle.
Bonke abantu abadala kufuneka bakwazi ukubonelela ngoncedo lokuqala xa kunobungozi kunye neengozi phakathi kwabantwana. Nangona kunjalo, ngexesha lokuxhalaba, bahlala belahleka, bexhala. Kufanelekile ukukhumbula izinto ezininzi ezingavumelekanga. Ngeemivimbo, sebenzisa ngokukhawuleza kunokwenzeka kwiindawo ezichaphazelayo ezibandayo (iqhwa, imali, intsimbi yesitya kwifriji). Ukuba i-ankle yonakaliswe, yiphakamise umlenze, faka isitya phantsi kwayo ukuze kungabikho ukuvuvukala. Ukuba uyakrokreka ukuphuka, ungavumeli umntwana ukuba ashukume aze asheshe ugqirha.
Xa kwenzeka ukutshisa, kha wuleza uqhagamshelane noshushu. Ngokomzekelo, unyawo olusenyukayo -susa amasokisi, upholise ukutshisa ngamanzi abandayo, unganqanda utywala, i-vodka kwindawo yokutshiswa, ukwenzela ukuba ukufudumala kwawo kuphephe ukushisa okukhulu. Musa ukusebenzisa nayiphi na ioli okanye iioli kwiiyure zokuqala-zenza ifilimu, ukukhusela ukushisa okugqithisileyo ekushiyeni (ukutshiswa kuya kuqinisa). Ukuba utshisa kakhulu, biza i-ambulensi ngokukhawuleza. Kulungele ukuba bonke babe nekhabhinethi yamayeza ekhaya i-aerosol ekutsheni "i-Panthenol" okanye "i-Olesol", ayinancinci, kodwa iyasebenza.
Ukuba amehlo omntwana ngexesha lokulungiswa kwindlu ehlambulukileyo, kufuneka uhlambuluke ngokukhawuleza, kodwa kungekhona ngamanzi, kodwa ngesisombululo esicacisiweyo seswekile.
Ukuba ukrokrelwa ngetyhefu, unike umntwana wakho ininzi yamanzi kunye ne-activated charcoal (kunye nosana unakho ukunikela kwiipilisi ezinhlanu, ngaphambi kokuzichonga kunye nokuchithwa ngamanzi). Ukuba le netyhefu ayinayo i-acid okanye i-alkali, ngoko unokuqala ukuhlanza, kubangele ukuhlanza (ucinezela kwingcambu yolwimi). Kungakhathaliseki ukuba ubuhlungu obunobunzima bubonakala bunjani, musa ukuzichukumisa, ezinye zeentyhefu sele zifakwe emzimbeni, ngoko ubiza nge-ambulensi ngokukhawuleza.
Abantwana abakhulileyo, ngelanga, banokuzilimaza. Ukuhlahlela ukusuka kwi-swing, ucingo, emthini, bavame ukuphazamisa amandla abo. Ukulimala, izingozi phakathi kwabantwana abaneminyaka emi-5 ukuya phezulu. Kwaye, ngokuqhelekileyo, zinzulu kakhulu kunezo eziselula. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuvelisa ingqondo ephilileyo yokuzinyameka kumntwana ukususela kwiminyaka yokuqala. Bonisa kwaye umxelele oko kukukhokelela ekukhathaleleni.
Ukufumba kunye nokuzivocavoca komntwana kunyaka owodwa
Umbono ombi wabantwana, ukuba uza kuthinta njani umntwana
Ngaba kunokwenzeka ukucwangcisa ngesondo somntwana ongakazalwa?
I-Horoscope ngo-Disemba 2017-I-Scorpiokazikazi-ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Yintoni endiyenze ukuba ndiyenze ukuba umntu enze ukoyika ukulahlekelwa ngumfazi
Ziziphi iintlobo zezingane ezizikhethela ubusika
Ubomi beentsimbi ezidumileyo
Ukuququzelela umcimbi womtshato - iingcebiso eziwusizo
Isiphi isihlalo somoto kubantwana singcono ukukhetha?